David De Gea Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi David De Gea Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhodhi Stopper inonyatsozivikanwa neNickname; 'Edwin Van De Gea'. Our David De Gea Childhood Story plus Untold Biography Facts inokuunzai zvizere nhoroondo dzezviitiko zvinokosha kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvehutano hwake asi vashomanana vanofunga nezvaDavid De Gea Biography Story iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Upenyu Hwekutanga
David de Gea Quintana akaberekwa musi we 7th waNovember 1990 muMadrid, Spain naJose De Gea (baba), aimbova mutariri wemugove uye Marivi Quintana (amai), muchengeti wemba.
Akazvarwa apo vabereki vake vakanga vari mukutanga kwavo 40 uye sevana voga vemhuri yake.
David De Gea akakurira nevabereki vake vakapfuma avo vasina kungobata mwanakomana wavo chete, asi vakamupa zvose zvaaida semwana wavo.
David somwana muduku aida zvikuru mitambo. Zvisinei, vabereki vake kunyanya amai vake vaitarisira zvakawanda nezvehutano hwakanaka pakati pezvidzidzo nemitambo. Vakamubvumira kuti atange basa rake rebhora mune imwe yepamusoro yeSpanish youth academies, kuburikidza nehupfumi hwemamiriro ehupfumi.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Career Start
Akatanga naLa Escuela De Futbol Atletico Casarrubuelos - avo vanobatana neAtletico Madrid. Cruz, mutambi wekare webhola, akambovhenekera grin iyo vakawanda vaDavid De Gea vaida kuwana zvakaoma kutenda. Akati, "Makore kusvika pauduku hwake, David akanga ari mutambi wakakwana kunze kwezera re 14 asati atendeukira kumunhu anochengeta chinangwa." O, hongu, iwe wakanzwisisa !! Akanga asati ari muchengeti wezvinangwa kubva pakutanga.
Pano, aingova 6 chete ane bvudzi rakachena rinopenya rinotora mifananidzo neboka rake.
David De Gea Mwana Wechiitiko
David akaitirawo timu yake yechikoro dzimwe nguva paidiwa. MuSpanish akadzoka mumufananidzo uri pasi apa akaratidzira unhu hwakanaka semuviri pamwe nemutambo wevashandi muhuduku hwake. Apo paidiwa, aigona kutamba zvese zvese (nzvimbo yekudzivirira, midhivi uye yekurwisa basa). David akaramba ari muchengeti wekunze kunze kwezera re14, iro iro rakatsanangura kuchinja kwebasa rake.
David De Gea Nyaya Yehuduku - Mazuva Ekutanga Mazuva
Kuramba kwake kukura kwakanyanya kwe6 ft 4 kunopera nguva yake semutambo. Akabatana nechishuvo chekutevera tsoka dzababa vake, David akasarudza kutendeukira kumugadziri wechinangwa cheupenyu. Kunze kwekuchengetedza chinangwa, David akabatanidzwawo mu basketball kwaakashandisa kureba kwake kureba.
David De Gea- Rimwe nguva mutsva mukuru wechigarire muguta
De Gea akasimbisa nzvimbo yake seye nguva yakazara yekuchengetedza vavariro nezera remakore gumi namana. Akanga ari chikamu chechikwata chakanga chakakunda nhamba huru yevechiduku vechiSpain. Iko kukura kwekotori khabhinethi muchechi yeDe Gea yevechidiki inofananidzwa pasi apa.
Bhuku rinokurira gurukota reDe Gea rechidiki, La Escuela De Futbol Atletico Casarrubuelos.
David De Gea youth team trophies
Pakarepo apo muchengeti wechidiki aive akagadzirira kuti ave nemakwikwi makuru, akakumbirwa kuti abatanidze timu yepamusoro yeAtletico Madrid. Pamusana pezvipo zvake zvakakura De Gea zvakasina chibvumirano chezvesheni panguva ye17.
Muna 2011 David akagamuchira chipo chinokuidza kuti mutambi wese ane tarenda, achiedza kuti ave nani, anotarisira mubasa rake. Manchester United yakava chikwata chitsva chaDavid uye yakasaina chibvumirano chenguva refu navo. De Gea akashandura iyo nhoroondo Edwin van der Sar mushure mekurega kwake. Basa rake rakanakisisa pachikwata chaitungamirira kune zita rezita rokuti 'Edwin Van De Gea '. Vamwe vose sezvavanotaura, ndeye zvakaitika.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
David De Gea mhuri yemhuri yakakodzera kuziva. Kazhinji, iye anouya kubva kumusha wakapfuma wevarindi vemagariro. Baba vake, Jose De Gea vakange vari muchengeti wekare weGetafe anozivikanwa nokuda kwekununura kwake. Akanga ari mumwe wevarindi vekutanga vavariro vakanyorerwa kuGetafe panguva yekuumbwa kwavo mumwaka we 1983-84. Baba vose nemwanakomana vakagara uye vakafema chiito chekuchengeta chinangwa. Jose, baba vake, ndiye mudzidzisi wake wakanakisisa nokuti anonyanya kuda. PaAtletico, aive pamutambo wose asiwo purogiramu yega yega yekudzidzisa mumvura, mhepo kana chando.
Mukadzi waDavid De Gea, Marivi Quintana ave ari muchengeti wehupenyu hwake hwose. Anorangarirwa nekutarisira murume wake uye mwana / mwana chete. Marivi Quintana anotsigira "kuenzana kwakakwana pakati pezvidzidzo nemitambo". Izvi aida mwanakomana wake.
Sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pasi apa, vabereki vose vatove vari mu 60 yavo. Vaiva nemwanakomana wavo mune zve 40. Vose vanogara Toledo, guta neguta riri pakati peSpain.
David De Gea Mhuri Yacho
Dhavhidhi kamwechete akayeuka; "Amai vangu vaizodana, vaviri, vatatu, kana kane pavhiki. Nguva dzose aiti ainetseka zvikuru pamusoro pangu. Aigara achishushikana nezvekuyera pakati pezvidzidzo zvangu nemitambo. Vabereki vangu vaizoendesa 50km pazuva kuti vauye kunditarisa paAtletico nzvimbo yekudzidzira munzvimbo yakawanda yeAlarcon ".
Kazhinji, kutsigirwa kwevabereki vake kwave kuchibatsira basa rake uye munhu. Basa ravo rokutungamirira riri pachena pakati pehama dzepedyo dzakavaziva.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Ukama Hupenyu
David De Gea haasati akaroora sepanguva yekunyora. The Spanard inonzi iine ukama hwakareba kwenguva refu Edurne García Almagro uyo ane makore 5 akakura kupfuura iye.
Edurne, ndiye muimbi weSpain, muiti wemitambo, uye muterevhizi weTV uyo anozivikanwa nekupinda kwevanhu vezvematongerwo enyika kubva paudiki hwake. Pazera re9, akava nhengo yeboka reimba yevaSpanish Trastos. Akasimuka mukurumbira munguva yekupedzisira 2005 paakazoita muSpain yakaratidza kuratidza Operación Triunfo ndokupedzisa munzvimbo yechitanhatu mu2006.
Havasi vakaroorana asi zvakadaro zvichida vari kufunga nezvavo munguva yemberi. Munhu wese anovaziva anovaona sevakaroorana vakakwana. David De Gea haana kumbobvira atora musikana muhupenyu hwake kunze kweEdurne. Maererano naye;
"Ini naDavid tinofara chaizvo pamwe chete. Anogara aripo nokuda kwake pasinei nokuti akabatanidzwa nechinangwa chekuchengeta zviito. Iye achiri kuwana nguva yakanaka yekuti ini. "
Rudo rwaDavid De Gea Nhau neEdurne
David naEdurne vanowanzoenda kumapato uye basa rakasiyana-siyana remitambo pamwechete. Zvechokwadi, mukadzi anogona kutaurira kana murume achimuda nenguva yakawanda yaanoda kuisa. Kuna Dhavhidhi, mari inoshandiswa paEdurne haina maturo. Inguva yakashandiswa iyo inokosha zvikuru.
David De Gea anoshandisa nguva yakanakisisa neAmai Girl Edurne
Radamel Falcao, Juan Mata, Antoine Griezmann uye Robert Lewandowski vave nerudo rwakafanana narwo saDavid De Gea.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Dhiyabhorosi Yemaziso
David de Gea ane hyperopia, izvo zvinoreva izwi remukati rekuona zviri mberi. Iyi inowanzosiyana yekukanganisa kwokukanganisa uko zvinhu zvakadzika zvinogona kuonekwa zvakajeka pane zvinhu zviri pedo.
MuSpanish ane magirazi akavhara kunze kwehupenyu hwake uye anoshandisa lens
Dhiyabhorosi David De Gea Akatadza-Sei achibatanidza kubudisa lens
Basa rake rekushanda harina kumbobvira rakanganiswa nehutano hwake hwakasimbiswa.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:His Super Agent
Jorge Paulo Agostinho Mendes (akaberekwa 7 January 1966), anonyatsozivikanwa sekuti Jorge Mendes ndiye mumiriri weDavid De Gea.
Mushandi waDavid De Gea- Jorgie Mendes
Mendes ari mumwe wevatungamiri vebhokisi rehutano munyika, uye nevatengi vanosanganisira Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, uye José Mourinho. Mendes inowanzotaurwa nezve "super-agent". Ane 102 mamwe mavheti ebasa sevatengi uye akagadzirisa zvibvumirano zvinokwana mari ye $ 1 Bhiriyoni.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:His Car
David De Gea anotungamirira Captiva - SUV yakaitwa naChevrolet ($ 50.000)
Kusiyana Raheem Sterling, haasi kushandiswa kuva nemotokari yemotokari, rimwe zuva rimwe nerimwe revhiki. David murume akangwara uyo anonyatsonakidzwa naye Chevrolet Captiva.
David De Gea's Chevrolet Captiva Car
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Imba yake
Imba yaDavid De Gea inokosha pa £ 2.75m. Mufananidzo unoratidzwa pasi apa.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Shamwari Yake Yekare-kare
Shamwari yekare yaDhavhidhi haisi mumwe munhu kupfuura Kun Aguero.
Shamwari yekare yaDavid De Gea naKan Aguero
Akava nani chaizvo Kun panguva yavo yeAtletico Madrid. Vose vari vaviri vakagovana muimba pamwe chete kare ipapo. Kwete nokuti havadi kuwana misha yakasiyana, asi nekuda kwehukama hwepedyo hwakagoverwa pakati pavo.
David De Gea Yakawedzerwa Basa Shamwari
Kare kare paAtletico, Apo Dhavhidhi anobata muchinjikwa, nyanzvi yake yekutanga ingadai iri kukurumidza kukurumidza kana kukanda kuisa Kun kure pane imwe yevadzidzi vake vechechi pazamu.
David De Gea Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Nyasha Style
David anonyanya kuzivikanwa nehomwe yake yepamusoro ye mohawk hairstyle.
Kuva nevhudzi rakanyatsoveurwa kubva kune rumwe rutivi ndechimwe chinhu chakambofanana neMan United United yose nekuda kwaDavid De Gea. Inoratidzika semadzinza akawanda anotevera aya aPoorg Pogba sezvo uyu mutsigiri weManchester United pasi apa anoratidza.
Manchester United Fan Fan Kopi David De Gea's Hairstyle
Koke Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Antoine Griezmann Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts